အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေတံခွန်အောက်က ချစ်စရာဟိုတယ်.....
23 Responses to “ရေတံခွန်အောက်က ချစ်စရာဟိုတယ်.....”
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟိုတယ်လေး၊ သွားချင်လိုက်တာ မချောရေ..
ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ ရှာရှာဖွေဖွေ အမြဲရေးတတ်တဲ့ မမ ပျော်ရွှင်ပါစေ
း)... မချော.. ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပေးရင် သွားမယ်.. လေယာဉ်လက်မှတ်ေ၇ာနော်..းP
ဟင်းးးးးးး မချောကတော့ လုပ်ပြန်ပြီ...
ရှုခင်းလေးတွေ တကယ်လှတယ်။ ကြည့်ရင် တကယ်ရောက်သွားချင်ခဲ့မိတယ်...
လိုက်ပို့ ပေး... လိုက်ပို့ ပေး...
အင်း ပိုက်ဆံစုလိုက်ဦးမယ် နော် ချစ်မကြီးရေး)
အင်း......... ဒီ တစ်သက်တော့....... မထင် မထင် မထင်။ အထဲမှာ အဲယားကွန်း လိုမယ့် ပုံ မရှိဘူးနော်။ သူ့ ဖာသာ အေးစိမ့်နေမယ့် သဘော၇ှိတယ် ။
Wow... That is so amazing, sis! The hotel looks very nice inside also. Let's travel together, sis :))
သွားလည်ချင်စရာ အတိနဲ့ စွဲဆောင်မှု ရှိလိုက်တာ...
ဟိုတယ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ပီယာနိုတေး တစ်ပိုဒ်၊ ချီလီဝိုင် တစ်ကျိုက်နဲ့ ဖြတ်သန်းချင်စရာ ကောင်းတယ်၊ သစ်တောထဲမှာပေမယ့် သဘာဝနဲ့ နီးစပ်အောင် ဆောက်ထားတဲ့ တကယ့် ချစ်စရာ ဟိုတယ်လေး ပါပဲဗျာ၊ စိတ်ကူးတွေကို အဲဒီဟိုတယ် ရှိရာဆီ ပျံသန်းခွင့် ပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..။း)
လှလိုက်တာ မချောရယ်. . . သွားချင်တယ် :)
မထင်ရက်စရာပဲနော်။ အပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံရခက်ခက်။ လက်တွေ့လိုက်ပြမှ ယုံတော့မယ် ချောရေး)) ရှုခင်းတွေကလည်း လှပါဘိ။
သေသေချာချာကို ကြည့်သွားပါသဗျား...စိတ်ထဲမှာ စွဲနေရင် တစ်နေ့နေ့မှာ အကောင်အထည်ပေါ်လာတယ်လို့ စိတ်ပညာဆရာများက ဆိုသကိုး...ဦးဟန်ကြည်တို့ရဲ့ ငွေရတု မင်္ဂလာပွဲကို အဲဒီဟိုတယ်မှာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်...အဲဒီပွဲမှာ ဟိုတယ်က စားဖိုမှူးတွေကိုတော့ အနားပေးလိုက်မယ်...ဒေါ်ချောလက်ရာက ပိုပြီးခံတွင်းလိုက်မယ်ထင်လို့...
အတော်သဘောကျသွားတယ် ရေသံလေးတွေနဲ့ အိပ်ရတာ ကောင်းမှာပဲ
မချော သွားရင် လက်တို့လိုက်နော်။ လိုက်မယ်..ဟဲဟဲ
တကယ်ကို အပန်းဖြေဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါပဲ...
လှလိုက်တဲ့ ရှု့ ခင်း
သိပ်ကို သွားချင်စရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါပဲ။ ဟိုတယ်ဈေးကလည်း ခေါင်ခိုက်နေမှာပဲနော်။း)